Cubot KingKong 7: ekwentị ọhụrụ na -emebi emebi. Atụmatụ na ọnụahịa | Androidsis
Tinyere mwepụta nke Cubot MAX, onye nrụpụta a ewepụtawokwa KingKong7, ekwentị agbagoro maka ndị ọrụ chọrọ ekwentị na -eguzogide ọdịda, ihe ijuanya, imikpu n'ime mmiri ... igwefoto, igwefoto na -eme nke ọma atụnyere nsụgharị ndị gara aga.
Iji mee mmemme mmalite ngwaọrụ a, anyị nwere ike nweta ya naanị $ 179,99, mgbe Ọnụ ego ya bụ $ 299,99. Ọ bụrụ na ịchọrọ irite uru na ntinye mmeghe, ị nwere ike mee ya njikọ na -aga na Aliexpress site na Ọgọst 23.
1 Ngalaba foto
Ọhụrụ Cubot KingKong7 bụ nke edobere igwefoto atọ. Ndị isi ihe mmetụta ruru 64 MP ma nwee oghere f: / 1,89. Na mgbakwunye, ọ na -agụnye a 16 MP obosara ya na oghere f / 2.4 yana akụkụ nlele nke ogo 124.8. Ihe mmetụta nke atọ nke ọdụ a na -enye anyị bụ nnukwu ihe mmetụta, ihe mmetụta nwere mkpebi nke 5 MP na oghere f / 2.2.
Igwefoto n'ihu bụ 32 MP, na -eji ọgụgụ isi mmadụ wezuga obere ezughị oke akpụkpọ anụ na mgbakwunye inye usoro mmeghe ihu. Ihuenyo nke Cubot KingKong 7 na -enye ruru 6,36 sentimita nwere mkpebi nke 2300 × 1080.
N'ime Cubot KingKong 7, anyị na -ahụ nhazi Helio P60 nke MediaTek, 8-core processor nke ga-enyere anyị aka inweta ihe kachasị na ngwaọrụ anyị, gụnyere egwuregwu kacha achọsi ike.
A na -esonyere nhazi ya 8 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa n'ime (nwere ike ịgbasa ruo 256 GB na kaadị TF). Batrị ahụ, bụ ike ọzọ nke ọdụ a, na -erute 5.000 mAh, karịa iji zuru oke iji nkwụsị na-akwụsịghị ụbọchị niile.
A na -ejikwa Cubot KingKong 7 Android 11 ma nwee mgbawa NFC nke, site na Google Pay, anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị. Ngwa a na -enye anyị asambodo IP68 na IP69K, yabụ anyị nwere ike iji ya n'ọnọdụ ọ bụla na -enweghị ihe egwu nke imebi ma ọ bụ kwụsị ọrụ.
Dị ka m kwuru n'elu, a Ọnụ ego Cubot KingKong 7 bụ $ 299,99. Agbanyeghị, iji mee mmemme mmalite nke ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ a, onye nrụpụta na -enye anyị ego mbelata nke $ 120, yabụ ọnụahịa ikpeazụ nke ọdụ a. Ọ na -akwụ naanị $ 179,99. Onyinye a dị site na Ọgọst 23.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe niile nkọwa nke Cubot ọhụrụ nyere EzeKong 7 Ana m akpọ gị oku ka ị gaa na webụsaịtị onye nrụpụta a site na njikọ nke anyị hapụrụ ntakịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » KingKong 7 bụ ekwentị ọhụrụ mebiri emebi nke Cubot maka $ 179,99
New Cubot MAX3: 6,95 sentimita na igwefoto 48 MP maka $ 99,99